Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.7 Drifting
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-agagharị agagharị, ndị na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe, na ndị na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe na-eme ka o sie ike iji nnukwu ihe ọmụma data na-amụ oge.
Otu n'ime uru dị ukwuu nke ọtụtụ nnukwu data data bụ na ha na-anakọta data n'oge. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ụdị data data ogologo oge data a . Na, na ntanetị, data ogologo oge dị ezigbo mkpa maka mgbanwe ọmụmụ. Otú ọ dị, iji nwee ike ịgbanwere mgbanwe, Otú ọ dị, usoro nhazi ahụ ga-adịgide adịgide. N'okwu ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze bụ Otis Dudley Duncan, "ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwere mgbanwe, agbanwela ihe ahụ" (Fischer 2011) .
N'ụzọ dị mwute, otutu usoro data-karịsịa usoro azụmahịa-na-agbanwe oge niile, usoro m ga-akpọ na- agagharị . Karịsịa, usoro ndị a gbanwere n'ụzọ atọ bụ isi: mbigharị ndị mmadụ (mgbanwe n'ime onye na-eji ha eme ihe), ịkpaghasị omume (mgbanwe na otu ndị mmadụ si eji ya), na usoro ngbanwe (mgbanwe na usoro ahụ n'onwe ya). Ebumnuche atọ nke esemokwu na-egosi na ihe ọ bụla dị na nnukwu ihe ọmụma data nwere ike kpatara mgbanwe dị mkpa n'ụwa, ma ọ bụ ihe ụfọdụ nwere ike ịmalite.
Isi mmalite nke ndị na-eji nwayọọ nwayọọ eme njem-bụ nke mgbanwe site na ndị na-eji usoro ahụ eme ihe, mgbanwe ndị a pụkwara ime na obere oge na ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, n'oge nhoputa ndi nlekọta nke United States n'afọ 2012, ọnụ ọgụgụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụmụ nwanyị dere edere na-aga n'ihu kwa ụbọchị (Diaz et al. 2016) . Ya mere, ihe nwere ike iyi ka ọ bụ mgbanwe na ọnọdụ nke Twitter-amaokwu nwere ike ịbụ naanị mgbanwe na onye na-ekwu okwu n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye na mgbanwe ndị a dị mkpirikpi, e nweela ihe na-eme ogologo oge nke ụfọdụ ndị mmadụ dị iche iche na-akwado ma na-ahapụ Twitter.
Na mgbakwunye na mgbanwe nke onye na-eji usoro, enwerekwa mgbanwe na otu esi esi eji usoro ahụ, nke m na-akpọ ịkpaghasị àgwà. Dịka ọmụmaatụ, n'oge mmegharị mkpesa 2013 nke Occupy Gezi na ndị Turkey, ndị mmegide gbanwere ejiji ha dị ka mkpesa ahụ malitere. Nke a bụ otú Zeynep Tufekci (2014) kọwaa ịkpaghasị omume, nke ọ na - achọpụta n'ihi na ọ na - ahụ omume na Twitter na n'onwe ya:
"Ihe merenụ bụ na ozugbo mkpesa ahụ ghọrọ akụkọ gbara ọkpụrụkpụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ ... kwụsịrị iji hashtags ma ọ bụghị iji dọrọ uche gaa n'ọhụụ ọhụrụ ... Ọ bụ ezie na mmegharị ahụ nọgidere na-aga n'ihu, ọbụna na-arịwanye elu, ndị hashtags nwụrụ. Ajụjụ ọnụ gosiri ihe abụọ kpatara nke a. Nke mbụ, ozugbo onye ọ bụla maara isiokwu ahụ, hashtag ahụ bụ ihe efu na njedebe na njirimara Twitter zuru oke. Nke abụọ, a hụrụ naanị ihe dị mkpa maka ịdọrọ uche gaa n'otu isiokwu, ọ bụghị maka ikwu banyere ya. "
N'ihi ya, na-eme nnyocha, bụ ndị na-amụ ngagharị iwe site n'inyocha tweet na mkpesa-metụtara hashtags ga-a agbagọ echiche nke ihe na-eme n'ihi na nke a akparamàgwà nwayọọ. Dị ka ihe atụ, ha wee kwere na ntụle nke ihe mkpesa ebelata ogologo oge tupu ya n'ezie mgbada n'usoro.
Ụdị ụdị nke atọ dị iche iche bụ usoro nhazi. Na nke a, ọ bụghị ndị mmadụ na-agbanwe ma ọ bụ na àgwà ha na-agbanwe, mana usoro ahụ gbanwere. Dịka ọmụmaatụ, na oge Facebook ka ọnụ ọgụgụ dị ogologo n'ogologo mmelite dị elu. Ya mere, nyocha ọ bụla gbasara mmelite ọnọdụ ga-abụ ihe na-adịghị mfe maka ihe ndị kpatara mgbanwe a. Ntughari usoro nwere njikọ chiri anya na nsogbu a na-akpọ algorithmic confounding, nke m ga-ekpuchi na ngalaba 2.3.8.
Iji mechie, ọtụtụ nnukwu isi data na-esegharị n'ihi mgbanwe nke onye na-eji ha, na otu esi eji ha, na otú usoro si arụ ọrụ. Ihe ndị a na-agbanwe mgbe ụfọdụ bụ ajụjụ na-akpali akpali, mana mgbanwe ndị a na-eme ka ikike nke nnukwu data data iji gbanwee mgbanwe oge ogologo oge.